Madaxweynaha Somaliya oo Kahadlay Werarkii Shalay Kadhacay Magaalada Kismaayo – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkii ee shalay lagu qaadey xarun ay Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo Ciidammada Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ku lahaayeen magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
War saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu qeyb ka yahay falalka ay argagixisada ku doonayaan inay ku wiiqaan horumarka ay Soomaaliya ku tilaabsaneyso.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in la sameyn doono baaritaan ku saabsan sida weerarkan u dhacay.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa intaa ku daray in dowladda ay xoogga saari doonto adkeynta xeryaha lagu tababarayo Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Xerada weerarka uu ka dhacay ayaa waxaa ka socdey tababar qeyb ka ah barnaamijka heerka qaranka ee isku dhafka ciidammada Xooga dalka.
Waxaa la is weydiinayaa sida gaariga qaraxa ka fuliyay xarunta ciidamada, iyadoo warar soo baxaya sheegayaan in ruuxa weerarka fuliyay uu ahaa askari ka tirsanaa ciidanka maamulka Jubbaland.